Xagee maraysaa badbaadinta doonida ganacsi ee ku caariday xeebta Boosaaso? - Puntland Mirror Believable Media Website
HomeSomaliaPuntlandXagee maraysaa badbaadinta doonida ganacsi ee ku caariday xeebta Boosaaso?
Dooni ayaa sida badeeco gaareysa 1500 tan. [Sawirka: c.bulshaawi]
Boosaaso-(Puntland Mirror) Shaqada badbaadinta doonida xamuulka sida ee xumaatay ayaa maraysa meeshii ugu dambeysay, sida ay sheegeen howlwadeenada.
Shiikh Fuaad Aflow, oo kamid ah howlwadeenada, ayaa warbaahinta u sheegay in hadda ay wadaan dhiggidii kunteenarada badda si doonta looga dajiyo badeecadda saaran.
Maalmihii ugu dambeeyay, ganacsatada ay doonida u rarantahay oo kaashanaya bulshada Boosaaso ayaa waday dhismaha dekad kumeel gaar ah oo lagu badbaadinayo badeecadda.
Doonida ganacsi oo sida badeeco gaareysa 1500 tan ayaa horaantii asbuucii lasoo dhaaftay ku caariday xeeb u dhow dekada Boosaaso kadib markii ay ciladowday.
Doonida oo ka timid magaalada Dubai ee Imaaraatka Carabta ayaa waxaa saaran badeeco gaaraysa $8 milyan, sida ay sheegeen ganacsatadu.
February 5, 2018 Dooni sida badeeco oo ay suurtagal tahay in ay ku degto xeebta Boosaaso
Madaxweyne Shariif Xasan: Waxaanu ka shaqayn doonaa horumarka
Baydhabo-(Puntland Mirror) Madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya, Shariif Xasan Shiikh Aadan ayaa maanta oo Isniin ah dhagax-dhigay wado cusub oo laami ah, taasoo laga dhisi doono magaalada Baydhabo. “Waxaanu dhagax dhignay jaamacad asbuucaan bilowgiisii, haddana [...]
Somali state minister among those killed in Mogadishu hotel attack
Mogadishu-(Puntland Mirror) Somalia’s state minister for environmental issue was among at least 17 people who were on Saturday afternoon killed in the Nasa-hablod hotel in the Somali capital, Mogadishu. Somalia’s state news agency Sonna [...]